Google Analytics ဖို့ Absolute Beginner ရဲ့လမ်းညွှန် - တရုတ် Ningbo Zhongyi ပလတ်စတစ်
Google Analytics ဖို့ Absolute Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
သငျသညျ Google Analytics ကဘာလဲဆိုတာမသိလျှင်, သင့်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားကြပြီမဟုတ်, သို့မဟုတ်ပါက install လုပ်ထားကြပါပြီဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုကြည့်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ post ကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်အများအပြားယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပေမယ့်, သူတို့ရဲ့အသွားအလာကိုတိုင်းတာရန် (ထိုကိစ္စအဘို့, သို့မဟုတ်မည်သည့် analytics) က Google Analytics မှအသုံးမပြုဖြစ်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနေဆဲရှိပါတယ်။ ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့အမြင်ရဲ့ absolute အစပြုရဲ့အချက်အနေဖြင့် Google Analytics သည်ကိုကြည့်တာပေါ့။ သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဘုံပြဿနာများကြောင့်နှင့်ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြုလုပ်ရရန်မည်သို့ပြုလုပ်လိုပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်တိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်က Google Analytics မှနျလိုအပျ
သငျသညျဘလော့ဂ်ရှိပါသလား သငျသညျအငြိမ်က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိသလား အဖြေကိုသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုများအတွက်များမှာဖြစ်စေ, ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သင်က Google Analytics မှလိုပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်က Google Analytics မှသုံးပြီးဖြေဆိုနိုင်သောသင့်ရဲ့ website မှာ ပတ်သက်. များစွာသောမေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ငါ၏အ converting ဧည့်သည်ဘယ်အရပ်ကလာနှင့်ငါ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်သွားပါခဲ့တာလဲ
အဲဒီမှာက Google Analytics မှဖြေဆိုနိုင်သောအများကြီးအပိုဆောင်းမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီအရှိဆုံးက်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များအတွက်အရေးအပါဆုံးသောသူများဖြစ်ကြ၏။ အခုတော့ရဲ့သင်သည်သင်၏ website တွင် Google Analytics ရနိုင်ပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
Google Analytics install လုပ်နည်း
သင်ပထမဦးစွာ Google Analytics အကောင့်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်က Gmail, Google Drive ကို Google ကပြက္ခဒိန်, Google+ မှာ, ဒါမှမဟုတ် YouTube တို့ကဲ့သို့အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သုံးမယ့်မူလတန်းက Google account တစ်ခုရှိပါက, ထို့နောက်သင်က Google account ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Google Analytics သည်ကို set up သငျ့သညျ။ သို့မဟုတ်သင်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဤသူသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အမြဲသာသင်တို့ဆီသို့လက်လှမ်းရှိသည်စောင့်ရှောက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ Google Account ကိုဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲလမ်းဆင်းအခြားလူများထံသို့သင်၏ Google Analytics မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားတော်မူနိုင်ပေမယ့်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့ချင်ကြပါဘူး။
Big အစွန်အဖျား: သူတို့သင်တို့အဘို့က "manage" နိုငျဒါကြောင့်သင့်မည်သူမဆို (စသည်တို့ကိုသင်၏ဝဘ်ဒီဇိုင်နာ, ကို web developer, ကို web host ကို, SEO ဆိုသည်မှာလူတစ်ဦး) မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် Google အကောင့်အောက်မှာသင့်ရဲ့ website မှာရဲ့ Google Analytics မှအကောင့်ဖန်တီးပါစေပါဘူး။ သင်နှင့်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနည်းလမ်းတွေဆိုရင်သူတို့ကသူတို့နှင့်အတူသင်၏ Google Analytics မှဒေတာများကိုယူလိမ့်မယ်, သင်တို့ရှိသမျှကိုကျော်ကိုစတင်ရပါလိမ့်မယ်။
သင့်အကောင့်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကို set up
သင်တစ်ဦးက Google account တစ်ခုရှိပြီးတာနဲ့သင်က Google Analytics ကိုသွားနှင့် Google Analytics မှခလုတ်ကိုသို့သင်္ကေတပြ click နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်က Google Analytics မှဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုယူရမယ်သုံးခုခြေလှမ်းများနှင့်အတူကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
သင်သင်္ကေတပြ Up ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ website အတွက်သတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။
Google Analytics သည်သင့်အကောင့်စုစည်းဖို့အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းပေးထားပါတယ်။ သင်တဦးတည်းက Google account တစ်ခုအောက်မှာအထိကို 100 က Google Analytics မှအကောင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တဦးတည်းက Google Analytics မှအကောင့်အောက်မှာအထိ 50 က်ဘ်ဆိုက်ဂုဏ်သတ္တိများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တဦးတည်းက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်မှာအထိ 25 အမြင်များရှိနိုင်ပါသည်။
ဇာတ်လမ်း 1: သင်တဦးတည်းက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါက, သင်တစ်ဦးတည်းသာက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်တသားတကို Google Analytics မှအကောင့်လိုအပ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်း 2: သင်သည်ထိုသို့သောသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်တစ်ဦးအဖြစ်နှစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်များ, ရှိပါကသင်တဦးတည်း "123Business" နှင့်တဦးတည်း "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ" နာမည်နှစ်ခုအကောင့်ဖန်တီးချင်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အောက်ရှိ 123Business အကောင့်အောက်မှာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း website နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ထားမည်။
ဇာတ်လမ်း 3: သင်အတော်ကြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသည်, ဒါပေမယ့်ထက်နည်း 50, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်လျှင်သင်တစ်ဦးက Business အကောင့်အောက်မှာထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထားချင်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး websites များအတွက်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိသည်။
ဇာတ်လမ်း 4: သင်အတော်ကြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသည်နှင့်သူတို့တစ်ဦးစီဒါအပေါ်ထိုကဲ့သို့သော 123Business အကောင့်အဖြစ် 50 ကျော်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ဦးစုစုပေါင်းအဘို့, သငျသညျ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အောက်မှာတစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထားချင်ပေလိမ့်မည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များများစွာ, 124Business အကောင့်များနှင့်ရှိပြီးလျှင်။
ဒါကြောင့်အကောင့်-ရုံသင်သည်သင်၏ဆိုဒ်များစုစည်းဖို့လိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အဘယ်သူမျှမပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်သင်၏ Google Analytics မှဖွင့်လှစ်ဖို့မှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲလမ်းဆင်းသင့်အကောင့်သို့မဟုတ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအမည်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတက Google Analytics မှအကောင့်မှအိမ်ခြံမြေ (က်ဘ်ဆိုက်) မရွှေ့နိုင်သောအခြား-သင်အကောင့်သစ်အောက်မှာအသစ်တစ်ခုကိုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကို set up နှငျ့သငျမူရင်းအိမ်ခြံမြေထံမှကောက်ခံသမိုင်းဆိုင်ရာ data တွေကိုဆုံးရှုံးဖို့ရှိသည်မယ်လို့သတိပြုပါ။
အဆိုပါအကြွင်းမဲ့အာဏာအစပြုရဲ့လမ်းညွှန်, ကြှနျုပျတို့သင်တဦးတည်းက်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးတည်းသာရှုမြင်ပါ (default အနေနဲ့, ရှိသမျှ data တွေကိုအမြင်မလိုအပ်ယူဆတာပေါ့။ အဆိုပါ setup ကိုဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုလိမ့်မယ်။
ဒီအောက်ဖက်, သင်သည်သင်၏ Google Analytics အချက်အလက်များအား shared နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ configure လုပ်ဖို့ option ကိုရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလက်စသတ်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင် Get ခြေရာကောက် ID ကို button ကို click ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရန်သဘောတူရန်ရှိသည်သောက Google Analytics မှစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ, တစ်ဦးပေါ့ပ်အပ်ရလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ Google Analytics မှကုဒ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ website မှာတိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားရပါမည်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းသင်ရှိသည်က်ဘ်ဆိုက်၏အဘယ်အရာကိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါကမ်ဘာဦးကမူဘောင်ကို အသုံးပြု. ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းပေါ်တွင်တစ်ဦးကို WordPress က်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ ဒီအမူဘောင်ငါ့အက်ဘ်ဆိုက်မှ header ကိုနှင့်အောက်ခြေ script များထည့်သွင်းဖို့တိကျတဲ့ဧရိယာရှိပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းပေါ်တွင်တစ်ဦးကို WordPress ရှိပါကတနည်း, သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်အသုံးပြုနေသောနေကြတယ်ဆိုတာကိုဆောင်ပုဒ်သို့မဟုတ်မူဘောင်ကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ကုဒ်တပ်ဆင်ရန် Yoast plugin ကိုအားဖြင့် Google Analytics ကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျက HTML ဖိုင်တွေနဲ့အတူ built website တစ်ခုရှိပါက, သင်သည်သင်၏စာမကျြနှာတစျခုစီပေါ် tag ကိုပု </ head> ရှေ့တော်၌ထိုခြေရာခံကုဒ် add ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ (ထိုကဲ့သို့သော Mac အတွက် TextEdit သို့မဟုတ် Windows အတွက်ကို Notepad ကဲ့သို့သော) စာသားအယ်ဒီတာအစီအစဉ်ကိုသုံးပြီး, ပြီးတော့တစ်ဦးတယောက်က FTP ပရိုဂရမျ (ထိုကဲ့သို့သော asFileZilla) ကို အသုံးပြု. သင်၏ဝဘ်အိမ်ရှင်ဖို့ဖိုင်တင်ဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦး Shopify e-commerce စတိုးဆိုင်ရှိပါက, သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်း Store က settings ကိုသွားပါနှင့်သတ်မှတ်ထားသောဘယ်မှာသင့်ရဲ့ခြေရာခံကုဒ်ထဲမှာ paste ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Tumblr သည်ပေါ်ဘလော့ဂ်ရှိပါက, သင်သည်သင့် Blog ကိုသွားသင့် Blog ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာ Edit ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက်သင့် setting တွင်ရုံ Google Analytics ID ကိုရိုက်ထည့်ပါပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Google Analytics ၏ installation သငျသညျ (အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, က်ဘ်ဆိုက်ဆောက် e-commerce ကိုဆော့ဖျဝဲ, etc), သင်အသုံးပြုဆောင်ပုဒ်, သင်အသုံးပြုတဲ့ plugins ကိုအသုံးပြုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အခြေခံ. ကွဲပြားခြားနားသည်။ သငျသညျကို Google Analytics မှ install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဟာသင့် platform + များအတွက်ဝဘ်ရှာဖွေရေးလုပ်နေသဖြင့်မည်သည့် website တွင် Google Analytics တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောညွှန်ကြားချက်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို set up
သင်သည်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ခြေရာခံကုဒ် install လုပ်ပြီးနောက်, သင်က Google Analytics မှပေါ်တွင်သင်၏က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအတွက် setting သေးငယ်တဲ့ (သို့သော်အလွန်အသုံးဝင်) configure ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပန်းတိုင် setting ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ Google Analytics ရဲ့ထိပ်မှာအဒ်မင် link ကိုနှိပ်ခြင်းအား, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ website မှာဖွင့်ကြည့်ရန်ကော်လံအောက်မှာရည်မှန်းချက်များအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုသင့်ရဲ့ website တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခါရည်မှန်းချက်များက Google Analytics မှပြောပြလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပုံစံမှတဆင့်ဆောင် generate ဘယ်မှာ website တစ်ခုရှိပါကဥပမာ, သငျသညျတှေ့ရ (သို့မဟုတ်ဖန်တီးပါ) ချင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးသူတို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြခဲ့ကြတခါဧည့်သည်များအပျေါမှာအဆုံးသတ်သောသင်စာမကျြနှာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်ထုတ်ကုန်ရောင်းဘယ်မှာ website တစ်ခုရှိပါကသို့မဟုတ်, သင်တို့ကိုရှာတွေ့ (သို့မဟုတ်ဖန်တီးပါ) ချင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသူတို့တစ်တွေဝယ်ယူမှုပြီးမြောက်ပါပြီတစ်ကြိမ်ဧည့်သည်များအပျေါ၌ဆင်းသက်ရန်အဘို့အသင်သို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းစာမျက်နှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။